Eleven airlines to move from YIA Terminal2to Terminal 1 this month | Yangon Aerodrome
Saturday 21st July 2018 17:43
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် Terminal2(T2) မှ လေကြောင်းလိုင်း ၁၁ လိုင်းသည် Terminal 1 (T1) သို့ အဆင့်ဆင့်ပြောင်း ရွှေ့သွားမည်ဖြစ်ပြီး Terminal 1 နှင့် Terminal2ချိတ်ဆက်ခြင်းကိုလည်း ဖွင့်လှစ်သွားတော့မည်ဖြစ်ပါ သည်။
ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် Biman Bangladesh Airlines သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်တွင် ၄င်း၏ BG060 / 061 လေယာဉ်ခရီးစဉ် များကို T1 ၊ Check-in area ရှိ Row C ၊ Counter အမှတ် 11 – 13 သို့ ပြောင်းရွှေ့ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ခရီးသည်များအနေဖြင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သတင်းအချက်အလက်များကို အောက်ပါအတိုင်း စုံစမ်းမေးမြန်း ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၏ Facebook page / Facebook Messenger facebook.com/yangonairport
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၏ တရားဝင် Website yangonairport.aero
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၏ 24-hour hotline နံပါတ် 01-9670777
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် Terminal 1 ၊ ဂိတ်အမှတ် (၄) အနီး Information Counter ရှိ Customer Service Officer များ နှင့် Airport Assistance Officers များ
Eleven airlines will move progressively from Terminal2(T2) to Terminal 1 (T1) of Yangon International Airport (YIA) with the opening of its inter-terminal connection.
Biman Bangladesh Airlines is the first of these airlines to move to T1 on7July 2018 for their BG060 / 061 flight, with the new check-in area at Row C, Counters 11 – 13.
Passengers can check updated information via various channels:
YIA Facebook page / Facebook Messenger at facebook.com/yangonairport
YIA official website at yangonairport.aero
By Yangon Aerodrome| 2018-07-06T16:01:16+00:00	July 6th, 2018|